မီးပြတိုက်: March 2011
Posted by SLIP in ခေါင်းဆောင်မှု
Posted by SLIP in အချိန်
Time is the cruelest teacher; first she gives the test, then teaches the lesson. ~ Anonymous
Time is like the wind, it lifts the light and leaves the heavy. ~ Doménico Cieri Estrada
Time! the corrector when our judgments err. ~ Lord Byron
Time: that which man is always tring to kill, ends in killing him. ~ Herbert Spencer
Time is the most undefinable yet paradoxical of things; the past is gone, the future is not come, and the present becomes the past even while we attempt to define it, and, like the flash of lightning, at once exists and expires. ~ Charles Caleb Colton
Time is what we want most, but... what we use worst. ~ Willaim Penn
Time is an equal opportunity employer. Each human being has exactly the same number of hours and minutes every day. Rich people can't buy more hours. Scientists can't invent new minutes. And you can't save time to spend it on another day. Even so, time is amazingly fair and forgiving. No matter how much time you've wasted in the past, you still have an entire tomorrow. ~ Denis Waitely
Life is not so short but that there is always time enough for courtesy. ~ Ralph Waldo Emerson
Time hasn't stopped for any troubles, heartaches, or any other malfunctions of this world, so please don't tell me it will stop for you. ~ C.S. Lewis
Time is the most valuable thingaman can spend. ~ Theophrastus
it, but you can spend it. Once you've lost it you can never get it back. ~ Anonymous
Time is everything. Anything you want, anything you accomplish - pleasure, success, fortune - is measured in time. ~ Joyce C. Hall
Time goes by so fast, people go in and out of your life. You must never miss the opportunity to tell these people how much they mean to you. ~ Anonymous
Alas, Time stays, we go. ~ Henry Austin Dobson
Don't wait. The time will never be just right. ~ Napoleon Hill
The time is always right to do what is right. ~ Martin Luther King
Welcome 66th Anniversary Armed Forces Day
Simplex method for solving problems of navigation and traffic control
ဒီရက်ပိုင်း လုံးပန်းနေတဲ့ April ၁၉ ရက်နေ့မှာ National Research University (MIET) တက္ကသိုလ် တွင် ကျင်းပမည့် ကျောင်းသားများနှင့် postgraduate များ၏ ၁၈ ကြိမ်မြောက် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ conference "Microelectronics and Informatics - 2011" အတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Presentation ဖြစ်ပါတယ်။
Simplex method ကို အသုံးပြု၍ navigation ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းခြင်း နှင့် ရွေ့လျှားနေသော အရာဝတ္ထုများကို control လုပ်ခြင်း။
Navigation System ဆိုသည်မှာ low emission power ကို အသုံးပြုထားသော အန္တရာယ်ကင်းသည့် ဘာကိုမှ မှီခိုမထားသော စနစ်ဖြစ်သည်။ Navigation System ၏ အဓိက အနှစ်သာရမှာ ရွေ့လျားနေသော အရာဝတ္ထုများ၏ တည်နေရာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဂြိုဟ်တုစနစ်များမှ ရရှိသော information များကို အသုံးပြု၍ တည်နေရာများကို ရှာဖွေခြင်းများ၊ ရွေ့လျား ဝတ္ထုများကို management လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် ရင်ဆိုင်နေရသော မော်တော်ယဉ်အရေအတွက် များပြားလာသည့်ပြဿနာအတွက် နိုင်ငံအလိုက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စနစ်များက control လုပ်ဖို့ လိုအပ်လျှက်ရှိသည်။ (Navigation System နှင့်ပတ်သက်ပြီး http://www.meepyatite.info/2008/03/navigation-system.html တွင် NAVIGATION SYSTEM ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ http://www.meepyatite.info/2010/09/navigation-system-darpa.html တွင် Navigation System & DARPA ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ http://www.meepyatite.info/2010/05/satellite-system-navigation-system-gnss.html တွင် Satellite System, Navigation System, GNSS Technology & GPS Technology ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်)
Monitoring လုပ်ခြင်းကို ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ပြဿနာများဖြစ်သည့် လက်တလော တည်ရှိနေသည့် တိကျသော တည်နေရာရှာဖွေခြင်း၊ လုံခြုံရေးစနစ်များ၊ vehicles များကို remote-control လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည်။ Navigator နှင့် GSM / GPS / GPRS စနစ်များကြားတွင် data များ exchange လုပ်ရာတွင် SMS စနစ်က ပိုမို ထိရောက်မှုရှိသည်။ သို့သော် Navigator နှင့် ယဉ် အရေအတွက် များပြားလာပါက simplex method ဖြင့် ဖြေရှင်းပါက အဆင်ပြေနိုင်ပေသည်။ (GPS ခေါ် Global Positioning System နှင့် ပတ်သက်ပြီး http://www.meepyatite.info/2009/01/global-positioning-system.html တွင် ဂျီပီအက်စ် စနစ် (Global Positioning System) ခေါင်းစဉ်နှင့် http://www.meepyatite.info/2009/03/gps_24.html တွင် GPS ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
Simplex method ဆိုသည်မှာ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် သခ်ျာပညာရှင် George Dantzig တွေ့ရှိထားသော linear programming ကို အခြေခံထားသည့် multidimensional space များတွင် optimization problem များကို ဖြေရှင်းပေးသည့် algorithm ဖြစ်သည်။ Simplex method ဖြင့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင် linear programming နှင့် graphical method များကို အသုံးပြုပြီး region တစ်ခုအတွင်းရှိ များပြားလှသော ပြဿနာများကို minimize လုပ်ပေးသည်။ (Simplex method အကြောင်းကို http://www.meepyatite.info/2011/01/methods-of-assignment-problem.html တွင် Methods of Assignment Problem ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ဖူးသည်)
Simplex method ၏ အလုပ်လုပ်ဆောင်မှု အဆင့်ဆင့်မှာ ပထမဆုံး အမြင့်ဆုံး (သို့) အများဆုံး ရလဒ်များကို အခြေခံ၍ တွက်ချက်သည်။ ရရှိလာသော ရလဒ်များကို အများမှ အနည်းသို့ (သို့မဟုတ်) အနည်းမှ အများသို့ အချိန်ပေါ်တွင် မူတည်ပြောင်းလဲမှု အတိုင်း စီစဉ်သည်။ အခြေခံနည်းအတိုင်း အမြင့်ဆုံးရလဒ်နှင့် ၎င်းမတိုင်ခင် ရှေ့မှ ရလဒ်တို့၏ အချိန်ပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲမှုကို တွက်ချက်သည်။ ရှာဖွေရရှိထားသော အချက်အလက်များကို linear programming အတွင်း ထည့်သွင်း၍ အဖြေကို ရှာဖွေသည်။
ဤနည်းကို အသုံးပြုရာတွင် သာမန် ပြဿနာအား linear programming ပြဿနာ ပုံစံမျိုးဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အတုအယောင် တစ်ခု ဖန်တီးရသည်။ ညီမျှခြင်း၏ တဖက်မှ ရလဒ်များအားလုံးကို သုညထက် ကြီးကြောင်း (သို့) သုည နှင့်ညီကြောင်း ယူဆ သတ်မှတ်ရသည်။ ညီမျှခြင်း အရေအတွက် များလျှင်များသလောက် M အရေအတွက်လည်း များလာမည်ဖြစ်သည်။
ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ညီမျှခြင်း တစ်ခုလျှင် မသိကိန်းနောက်တစ်ခု အသစ်ပေါင်းထည့်၍ မညီမျှခြင်း များကို ညီမျှခြင်း အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲယူရသည်။ n တန်ဖိုးမှာ ညီမျှခြင်းတွင် ပါရှိသော မသိကိန်းအရေအတွက်ဖြစ်ပြီး m မှာ ညီမျှခြင်း အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ မသိကိန်းအရေအတွက် တိုးလာတိုင်၊ ညီမျှခြင်း အရေအတွက် တိုးလာတိုင်း n နှင့် m တန်ဖိုးများ တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။
Simplex table ဖြေရှင်းနည်းတွင် Simple Method တွင် Table နည်းဖြင့် ဖြေရှင်းမည် ဆိုလျှင် variable များကို ဇယားအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ထိုသို့ထည့်သွင်းရာတွင် variable များကို column အတိုင်း အစဉ်လိုက်ထည့်သွင်းရမည်။ variable များအားလုံး ကို ဇယားတွင်း ထည့်သွင်းပြီးချိန်တွင် ရှုပ်ထွေးနေသော ပြဿနာသည် အကန့်အလိုက် ရိုးရှင်းသော သာမန်ပြဿနာသို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ Columns အားလုံးကို အစားသွင်းပြီးချိန်တွင် သာမန်လွယ်ကူသော ပြဿနာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပြီး ဖြေရှင်းရန်အသင့်ဖြစ်သွားသည်။ အကယ်၍ M တန်ဖိုး အလွန်များနေသည်ဆိုပါက အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲမှု ရလဒ်အတိုင်း ကိန်းရှင်များကို ဆက်လက်ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် မူလက ဖြေရှင်းဖို့မဖြစ်နိုင်သော ပြဿနာကြီး မှ အပိုင်းအလိုက် ပြဿနာများဖြစ်လာစေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် M တန်ဖိုး သည် အဓိကဖြစ်လာပြီး row အလိုက် M များ အပို ပါဝင်လာ ကာ ကွန်ပျူတာ အခြေခံတွက်ချက်နည်းအတိုင်း M ကို မြှောက်ဖော်ကိန်းအဖြစ် တွက်ထုတ်အဖြေရှာနိုင်သည်။
ညီမျှခြင်းများကို ဇယားတွင် Simplex Method အတိုင်း အဆင့်ဆင့် အစားသွင်း တွက်ချက် အဖြေရှာပုံများ ဖြစ်သည်။
Graphical solution နည်းဖြင့် LP (linear programming) ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပုံမှာ ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ ပေးထားသော ညီမျှခြင်း ဖြစ်သည်ဆိုပါဆို့ ခြယ်ထားသော ဧရိယာသည် constraints အားလုံး၏ အဖြေဖြစ်သည်။ linear programming ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနည်းအတိုင်း လိုအပ်သော ကောင်းဆုံးရလဒ် အများဆုံးတန်ဖိုးကို ရရှိသည်။ objective function အတိုင်း အချိန်အလိုက် ရလဒ်များကို ထည့်သွင်းအဖြေရှာခြင်းကို optimal value of LP problem ဖြေရှင်းခြင်း ဟုခေါ်သည်။
Graphical Solution နည်းကို အသုံးပြုအဖြေရှာခြင်းဖြင့် ဘောင်ကို တဖြည်းဖြည်း ကျဉ်းသည်ထက်ကျဉ်းအောင် ပြုလုပ်ပုံများဖြစ်သည်။
ဖော်ပြပါ slide တွင် object တစ်ခု၏ location ရှာဖွေပုံကို ဥပမာ ပြထားသည်။ Research လုပ်မည့် Area တစ်ခုတွင် antenna ၄ ခု နှင့် navigator တပ်ဆင်ထားသော ယဉ် တစ်စီး ရှိသည် ဆိုပါဆို့။ အလုပ် စလုပ်သည်နှင့် တပြိုင်နက် Navigator မှ antenna ၄ ခု ဆီမှာ signal များကို အသီးသီးရရှိပေမည်။ ထို signal များ၏ အလျှားပေါ်တွင် မူတည်၍ အသုံးပြုမည့် ဧရိယာပေါ်တွင် ဝင်ရိုးနှစ်ခု သက်မှတ်ကာ ညီမျှခြင်းများကို ရှာဖွေတွက်ချက်မည်ဖြစ်သည်။ ရရှိလာသော ညီမျှခြင်းများဖြင့် အသုံးပြု ဧရိယာပေါ်တွင် line များရေးဆွဲနိုင်သည်။ (အထက်တွင် Navigator နှင့် Satellite စနစ် များအကြားဟု ဖော်ပြခဲ့ပြီး ယခုအခါ Satellite များ နေရာတွင် Antenna များကို အသုံးပြုရခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် Satellite လွတ်တင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Satellite များ နေရာတွင် Antenna များဖြင့် အစားထိုး အသုံးပြုကာ တည်နေရာကို Simplex Method မဟုတ်ပဲ Power တန်ဖိုး ကို မှီခိုရှာဖွေသည့် အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး http://www.meepyatite.info/2008/05/antenna-navigating-system.html တွင် Antenna Navigating System ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ http://www.meepyatite.info/2009/06/1.html တွင် MY RESEARCH ( RUS / ENG / MM ) ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း ရုရှား၊ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ သုံးဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားသည်ကို ပြန်လည်လေ့လာနိုင်ပြီး http://www.meepyatite.info/2009/11/blog-post.htmlတွင် အရေးပါဆုံး ဂြိုဟ်တုစနစ်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီး ဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ဂြိုဟ်တုစနစ်များအကြောင်း နှင့် http://www.meepyatite.info/2010/07/idea.html တွင် သိပ္ပံ နှင့် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ Idea အချို့ ကို လေ့လာနိုင်သည်)
ဥပမာ ပထမဆုံး အတိုင်းတာမှုတွင် 3x +4 y ≤ 12 ဟူသော ညီမျှခြင်း ရရှိပါက x နှင့် y တန်ဖိုးများမှာ x = 4, y =3ဟူ၍ ရရှိပေမည်။ ထိုတန်ဖိုးများအတိုင်း မျဉ်းတစ်ကြောင်းကို ရေးဆွဲနိုင်ပြီး ဤအနေအထားတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနေသော object သည် 3x +4 y ≤ 12 မျဉ်း၏ အတွင်းတွင် ရှိမည်ဟု ကျိန်းသေ ပြောနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အတိုင်းအတာများကို antenna နောက်တစ်ခုမှ ရရှိလာသော ညီမျှခြင်းဖြင့် ဆက်လက်တွက်ချက်ပြီးချိန်တွင် ပုံတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း မျှဉ်းနှစ်ကြောင်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း အခြေအနေတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနေသော object သည် ရရှိလာသော မျဉ်းနှစ်ကြောင်းအတွင်းသာ သေချာပေါက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး အဖြူရောင် ခြယ်ထားသော နေရာများတွင် လုံးဝ မရှိကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။
တတိယမြောက် နှင့် စတုထ္တမြောက် တို့မှ အတိုင်းအတာများ ရရှိအပြီးတွင် အနီရောင် နှင့် အစိမ်းရောင် မျဉ်းများ ရရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး မျဉ်းများ၏ ဆုံမှတ် (သို့) တြိဂံ သည် ကျွန်ုတို့ လိုအပ်နေသော တည်နေရာပင်ဖြစ်သည်။
The location of the antennas is selected for reasons of security zones crossing action antennas, so that would provide quality reception of transmitted signals and the location of antennas inaspace with light maps. Creating such systems is of particular importance for those countries which have no satellites, such as Myanmar. In this paper the option of establishinganavigation system for the capital city of Myanmar, Yangon. Proposed location of antennas, Methods of modulation and signal processing as well as the structure of mobile transmission and receiving devices. Using antenna navigation system used on its own territory, allows to determine the location of objects more precisely. This system is very fast and can be easily deployed anywhere in the world. Speed of receiving and sending signals faster than in other systems. In addition the system is available at cost.
Examines the use cimpleks method for solving problems of navigation;
Consideration of options for the construction of systems for processing and managing information on the status of facilities management;
The possibility of using an antenna system in the absence of satellites;
In addition, the proposed method can solve many problems in navigation, such as coordinate the work of the fleet, the search of the vehicle in case of theft, and many others.
Posted by SLIP in အတွေးမှတ်စုများ, အောင်မြင်ရေး
ပစ္စည်းဥစ္စာ ပေါများရခြင်း အကြောင်းသည် ဒါန၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရခြင်း အကြောင်းသည် သီလ၊ ကိုယ်စိတ်နှပါး ချမ်းသာရခြင်း အကြောင်းသည် ဘာဝနာ။
ဆန္ဒဆိုတာရဲ့နောက်မှာ အသိတရား၊ ဒါမှမဟုတ် ဆင်ခြင်တုန်တရား၊ ဆိုတဲ့ တစ်ခုခုသာ အမြဲရှိနေရင် အမှား ဆိုတဲ့ စကားလုံး ဝင်လာဖို့ နေရာ မရှိတော့ဘူး။
ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့ စကားတွေကို ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့အချိန်မှာ မပြောခဲ့ဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီစကားတွေက ကြာလေလေပြောဖို့ခက်လေပဲ။
အမှားများ ကို မှားရန်အတွက် ကြိုးစားရှာဖွေနေသူများကို လူငယ်ဟုခေါ်သည်။
အမှားများ ဖြင့် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေသူများကို လူလတ်ဟုခေါ်သည်။
အမှားများ စွာကို အကြိမ်ကြိမ် ကျူးလွန်ပြီးနောက် နောင်တတရားဖြင့် ရှင်သန် နေထိုင်သူကို လူကြီးဟု ခေါ်သည်။
အောင်မြင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ သင် ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ ရှိသလောက် ထွန်းပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များသို့ ခရီးပေါက် အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပစ္စုပ္ပန်ကို အတိတ်ထက်ပိုပြီး သာလွန်ကောင်းမွန်လိုတဲ့အခါ....
အဲ့ဒီ ဖြစ်ရပ်တွေထဲက တန်ဖိုးရှိတဲ့ သင်ခန်းစာ ထုတ်ယူပါ၊
ပစ္စုပ္ပန်မှာ အတိတ်တုန်းကနဲ့ မတူအောင် ဆောင်ရွက်ပါ။
အနာဂါတ်ကို ပစ္စုပ္ပန်ထက် သာလွန်ကောင်းမှန်အောင် ဖန်တီးချင်တဲ့အခါ....
သာယာဝေစည်တဲ့ အနာဂတ်ပုံရိပ်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊
အဲ့ဒီပုံရိပ် တကယ်ဖြစ်လာအောင် အထောက်အကူပြုမယ့် အစီအစဉ်တွေ ချမှတ်ပါ၊
သင့်စီမံကိန်းကို ပစ္စုပ္ပန်မှာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါ။
အရည်အချင်းရှိအောင်သာ ကြိုးစားပါ။ အောင်မြင်မှု က သူ့ဘာသာလိုက်လာလိမ့်မည်။
ကိုယ့်အနေနဲ့ အနာဂါတ်အကြောင်း မျက်ရမ်းမှန်းဆ တွေးပူနေမယ့်အစား တစ်နေ့ချင်း တစ်နေ့ချင်းကို ချမ်းသာသုခ အပြည့်နဲ့ နေနိုင်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ နားလည်ပါ။
သင် စိတ်ချမ်းသာပြီး အောင်မြင်သူဖြစ်လိုတဲ့အခါ ပစ္စုပ္ပန်မှာ မွေ့ပျော်နေထိုင်ပါ။ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ကို အာရုံပြုပါ။ သင့်ရည်မှန်းချက်ကို အသုံးပြုပြီး လောလောဆယ်အရေးကြီးနေတဲ့ ကိစ္စကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပါ။
စိတ်ကို ပစ္စုပ္ပန်မှာ တည်ထားလိုက်ရုံနဲ့ မင်းစိတ်ချမ်းသာလာမယ်၊ အောင်မြင်မှုတွေရလာမယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား?။
ပစ္စုပ္ပန်မှာ ဖြစ်တည်နေထိုင်ခြင်း၊ အတိတ်မှ သင်ခန်းစာယူခြင်း၊ အနာဂါတ်အတွက် စီမံကိန်းချခြင်း ဆိုတာတွေလောက်နဲ့ မပြီးသေး။ ရည်မှန်းချက်နဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်ပြီး ပစ္စုပ္ပန်၊ အတိတ်နဲ့ အနာဂတ် အတွက်အရေးကြီးကိစ္စတွေကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှသာ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်အားလုံး အဓိပ္ပါယ်ရှိလာမည်။
ယုံကြည်မှုသည် အောင်မြင်မှု၏ ဇစ်မြစ်။
သင်သည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနေထိုင်ပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ၊ မျက်မှောက်ကာလမှာ အရေးကြီးတာကို တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ ဦးစီးဦးဆောင်ပြုခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း၊ အဆွေခင်ပွန်းဖွဲ့ခြင်း၊ မေတ္တာထားခြင်း တွေမှာ စွမ်းရည်များ သိသိသာသာ ပိုမိုမြင့်တတ်လာမည်။
အချစ်ဆိုတာ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတစ်ခု။ စားဝတ်နေရေးပြည့်စုံမှ အချစ်ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်လို့ရတာ။ စားဝတ်နေရေးမပြည့်စုံရင် အချစ်ဆိုတာ ခါးသီးမှုပဲ။
ဘ၀မှာ အချစ်က လွှမ်းမိုးသွားရင် ဘာကိုမှမြင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။
မှားတာ၊ အဆင်မပြေတာကို များများကြည့်လေ အားမာန်နဲ့ ယုံကြည်မှုနည်းလေပဲ။
အခြေအနေဆိုးနဲ့ ကြုံနေချိန်မှာ ရှာကြည့်ဖို့ခက်ခဲပေမယ့် လမ်းမှန်တဲ့ အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းတွေ ရှာကြည့်တတ်ဖို့ အရေးကြီး၏။ ထို့နောက် မှန်ကန်အဆင်ပြေသည့် အကြောင်းကို တန်ဖိုးထားလေးစားပါ။ ထို့နောက် ယင်းအပေါ် အခြေပြုပြီး နောက်ထပ်မှန်တဲ့အဆေင်ပြေတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ယူပါ။
အတိတ်ကနေ သင်ခန်းစာ ထုတ်ယူလို့ရသည်။ သို့သော် အတိတ်တွင် မွေ့ပျော်နေခြင်းသည် အမြော်အမြင်ရှိခြင်းမဟုတ်။
လောလောဆယ်အချိန်မှာ အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းကို တန်ဖိုးထား လေးစားလေ ပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုရလေပဲ။
ပစ္စုပ္ပန်မှာ ဖြစ်တည်နေထိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာ လက်တလောရည်မှန်းချက်က ဘာလဲဆိုတာ သတိကပ်ပြီး အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်အတိုင်း တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းသာ။
သာယာလှပတဲ့ အနာဂတ်ဘဝဟာ ဘယ်လိုနေမလဲ ဆိုတာ စိတ်ကူးပုံရိပ်ဖော်ကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီဘဝမျိုး ဖြစ်ထွန်းလာအောင် လက်တွေ့ကျတဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခု ဖန်တီးပါ။ သင့်စီမံကိန်းကို လောလောဆယ်ပဲ အကောင်ထည်ဖော်ပါ။
လတ်တလော ရည်မှန်းချက်က ဘာလဲ? အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကို လက်တွေ့ အကောင်ထည်ပေါ်လာအောင် ဘာတွေလုပ်နေလဲ? ဆိုတာကို နေ့စဉ် သုံးသပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိပါစေ။
အောင်မြင်မှု ရဖို့သည် မလွယ်ကူပါ။ ရပြီးသား အောင်မြင်မှုကို ထိန်းသ်ိမ်း ရခြင်းက ပို၍ခက်ခဲသည်ကိုလည်း သတိပြုပါ။
Simplex method for solving problems of navigation ...